निषेधाज्ञा खुकुलोको एक साता- कोरोना संक्रमणदर न बढ्यो, न घट्यो :: Setopati
निषेधाज्ञा खुकुलोको एक साता- कोरोना संक्रमणदर न बढ्यो, न घट्यो
विवेक राई काठमाडौं, असार १३
सरकारले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाएको एक साता हुन लाग्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर स्थिर देखिएको छ।
निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुअघिको एक साता र यस साताको तथ्यांक हेर्दा संक्रमणदर २१ प्रतिशत छ।
असार १ गतेदेखि ७ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल ८५ हजार ३५९ जनाको परीक्षण गरिएकोमा १८ हजार ८८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जसमा संक्रमण दर २१.१९ प्रतिशत थियो। त्यसपछि यो साताको तथ्यांक हेर्ने हो भने हिजो (शनिबार) सम्म कुल ६५ हजार ४२० जनाको परीक्षण गर्दा १३ हजार ९०९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यो भनेको संक्रमण दर २१.२६ प्रतिशत हो। अर्थात् पछिल्लो एक सातामा निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाइए पनि संक्रमणदर बढेको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले संक्रमणदर नघटे पनि स्थिर रहनु पनि राम्रो रहेको बताएका छन्।
उनले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइए पनि संक्रमण नबढेको भन्दै यसले राम्रो संकेत गरेको जनाए।
'निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कतै संक्रमण बढ्छ कि भन्ने डर थियो तर बढेको पाइएको छैन। त्यसैले संक्रमण नघटेपछि स्थिर रहनु पनि राम्रो कुरा हो,' पौडेलले भने, 'यसरी नै मानिसहरूले नियम पालन गर्नुभयो भने हामी छिट्टै नै राम्रो अवस्थामा पुग्छौं।'
यद्यपि संक्रमणदर नघटेका कारण निषेधाज्ञालाई ठ्याक्कै कस्तो बनाउने भनेर अहिले भन्न नसकिने उनी बताउँछन्।
प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, 'हामी अहिले पनि 'वेट एन्ड वाच' को अवस्थामा छौं।'
काठमाडौं उपत्यकामा पनि गत असार ८ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै एक साताको लागि थपिएको थियो। जसमा निजी सवारीसाधनलाई जोरबिजोर प्रणालीबाट चल्न दिइएको छ। उपत्यकाको निषेधाज्ञाको समयावधि सकिन दुई दिनमात्र बाँकी भएपछि आजै तीन वटै जिल्लाका सिडिओ बैठक बस्दैछन्।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसार निरौलाले निषेधाज्ञाबारे थप निर्णय गर्न सम्भवत बैठक आजै बस्ने जनाए।
उनले जारी निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाइने बताए।
'कोरोना संक्रमण जुन अवस्थामा घट्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो घटेन,' ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले सेतोपाटीसँग भने, ‘निषेधाज्ञालाई जारी राखिन्छ तर के-के खुल्न दिने भन्ने निर्णय गर्छौं।'
यद्यपि निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउने तयारी भइरहँदा सार्वजनिक यातायातलाई भने अहिले नै नखुलाइने भएको छ।
सरकारले आन्तरिक हवाइ सेवालाई आगामी असार १७ गतेबाट सञ्चालन गर्न दिने भएपछि यातायात व्यवसायीहरूले पनि सार्वजनिक यातायात खोल्न दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
विज्ञहरूले समेत संक्रमणदर नघटे पनि अहिलेको अवस्थामा स्थिर रहनु पनि राम्रो रहेको बताएका छन्।
टेकु अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले संक्रमणदर स्थिर रहँदा तत्कालको लागि अर्को समस्या नआउने बरू विस्तारै संक्रमण घट्दै जाने बताए।
'हुन त निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको पाँच दिनमात्र हुँदैछ। जसले गर्दा अहिले नै संक्रमणको अवस्था केलाउन हतार हुन्छ। किनभने संक्रमण भयो भने त्यसको लक्षण देखिन पाँचदेखि १४ दिन लाग्छ। तर पनि संक्रमण स्थिर रह्यो भने पनि तत्कालका लागि अर्को समस्या आउँदैन भन्ने चाहिँ हो,' उनले भने, 'अझ दुई साता पुगेपछि संक्रमणको अवस्था के हो भनेर भन्न सजिलो हुन्छ।'
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १३, २०७८, १३:१६:००